Baarlamaanka oo ka dooday xagjirnimada | Somaliska
Baarlamaanka Sweden ayaa maanta ka dooday xagjirnimada ka dib codsi ka yimid gudoomiyaha xisbiga cunsuriga ee Sverige Demokraterna (SD) Jimmie Åkesson asagoo si gaar ah u doortay in uu xooga saaro waxa uu ugu yeeray xagjirnimada Islaamka balse xisbiyada kale ee baarlamaanka ayaa diiday in dooda lagu koobo Islaamka oo keliya ayadoo gudoomiyaha baarlamaanka uu dooda u badalay mid ku saabsan dhamaan xagjirnimada. Jimmie Åkesson ayaa sheegay in aan la aqbali karin in Sweden aysan lahayn qorshe looga hortagayo xagjirnimada Muslimiinta, ayadoo wasiirka cadaalada Sweden ay u jawaabtay oo sheegtay in Sweden ay tahay wadan xoriyad leh oo dadka diimaha kala duwan ay si siman u nool yihiin ayadoo ku baaqday dhamaan xagjirnimada in laga hortaga haday tahay mida Muslimiinta, mida SD, iyo mida ururada bidixda. Sven-Erik Östberg oo u hadlay xisbiga Social Demokraterna ayaa sheegay in qaraxii Stockholm iyo ninkii dadka soo galootiga ah ku argagixiyay magaalada Malmö ay tusaale u yihiin dhibaatada xagjirnimada asagoo intaas ku daray xagjirnimada xaga diinta iyo mida siyaasada oo ay tusaale u yihiin SD in laga hortago. Ugu dambeyntii ayuu sheegay in fiiro gaar ah loo yeesho iskuulada gaarka ah ee diinta lagu dhigo.
Baarlamaanka Sweden ayaa maanta ka dooday xagjirnimada ka dib codsi ka yimid gudoomiyaha xisbiga cunsuriga ee Sverige Demokraterna (SD) Jimmie Åkesson asagoo si gaar ah u doortay in uu xooga saaro waxa uu ugu yeeray xagjirnimada Islaamka balse xisbiyada kale ee baarlamaanka ayaa diiday in dooda lagu koobo Islaamka oo keliya ayadoo gudoomiyaha baarlamaanka uu dooda u badalay mid ku saabsan dhamaan xagjirnimada.
Jimmie Åkesson ayaa sheegay in aan la aqbali karin in Sweden aysan lahayn qorshe looga hortagayo xagjirnimada Muslimiinta, ayadoo wasiirka cadaalada Sweden ay u jawaabtay oo sheegtay in Sweden ay tahay wadan xoriyad leh oo dadka diimaha kala duwan ay si siman u nool yihiin ayadoo ku baaqday dhamaan xagjirnimada in laga hortaga haday tahay mida Muslimiinta, mida SD, iyo mida ururada bidixda.
Sven-Erik Östberg oo u hadlay xisbiga Social Demokraterna ayaa sheegay in qaraxii Stockholm iyo ninkii dadka soo galootiga ah ku argagixiyay magaalada Malmö ay tusaale u yihiin dhibaatada xagjirnimada asagoo intaas ku daray xagjirnimada xaga diinta iyo mida siyaasada oo ay tusaale u yihiin SD in laga hortago.
Ugu dambeyntii ayuu sheegay in fiiro gaar ah loo yeesho iskuulada gaarka ah ee diinta lagu dhigo.